इनारमा कसले फा'ल्यो न’वजा’त शि’शुलाई ?
इनारमा कसले फा’ल्यो न’वजा’त शि’शुलाई ?
सिरहा । सिरहामा इनारमा फा’लेको अवस्थामा एक न’वजा’त शि’शुको श’व फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी सिरहाका अनुसार सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका ७ कसहामा रहेको इनारमा एक न’व’जा’त शि’शुको श’व भेटिएको छ । क’स’हा चोकदेखि करिब १५० मिटर दक्षिणमा रहेको भोगेन्द्र महतोको इनारमा शि’शुको श’व फेला परेको हो ।
बच्चा ज’न्मे लगत्तै इ’ना’रमा फालेको हुनसक्ने प्रहरीको अ’नु’मान छ । इनारमा ग’न्हा’एपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि शि’शुलाई इनारबाट निकालिएको छ । घ’ट’ना विषयमा अ’नु’स’न्धा’न भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । शि’शुको श’व पो’स्ट’मा’र्ट’मको लागि लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मा’रिका अस्पताल लहानमा राखेको जिल्ला प्रहरी सिरहाले जनाएको छ ।
बागलुङको गलकोट नगरपालिका-८ काँडेबास प’चु’वामा घाँ’स का”ट्न जाने क्रममा ल’डे’र एक जनाको मु’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा स्थानीयवासी ३३ वर्षीय अशोक कँडेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक इकवाल हवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाँ’स का’ट्न जाने क्रममा ल”डे’र मुत्यु भएको अवस्थामा आज उहाँको श’व फेला परेको छ ।
कँडेल बुधबार दिउँसो १२ बजे प’चुवाकै कु’भि’न्डो भन्ने ठाउँमा घाँ’स का’ट्न’ भनेर जानुभएको र बेलुकासम्म नफर्केपछि परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । खो’ज’त’ला’सका क्रममा उहाँ मृ”ता’वस्था’मा फे’ला परेको र घ’ट’नाका स’म्ब’न्धमा थप अ’नु’स’न्धा’न शुरु गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक हवारीले जानकारी दिए। श’व प’री’क्षणका लागि अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङमा पठाइएको छ ।